Waxsansheeg News - Gaadhsiinta Waxsoosaarka Wadada Diyaarinta PET ee Tajikistan
Gaarsiinta Waxsoosaarka Waxsoosaarka 'PET Rope Filament' ee Tajikistan
Bishii Juun 10-keedii, 2020, waxaan diyaarinnay shixnad xamuul oo loogu talagay qadka wax soo saarka PET xariga xarkaha oo uu dalbaday macmiilka Tajikistan. Shixnadu waa tareen, sidaa darteed macmiilku si dhakhso leh ayuu alaabta u heli karaa.
Sababo la xiriira saamaynta COVID-2019, ku dhawaad ​​dal kasta oo adduunka ah wuxuu hirgaliyay quful xaddidan oo heerar kala duwan ah si loo xakameeyo faafitaanka COVID-2019.
Laakiin sababta oo ah gudbinta-aadanaha-ee-aadanaha ee COVID-2019, faafitaanku waa mid dhakhso badan, gaar ahaan waddamada isku xidhan ama aan raacin taxadarka sayniska. Tirada dadka lagu xaqiijiyay COVID-2019 adduunka oo dhan wuxuu gaadhay 7,000,000, oo ah lambar la yaab leh.
Si kastaba ha noqotee, alaabadayadu waxay heleen su'aalo badan oo ka yimid macaamiisha shisheeyaha ah, waxaana amarkii la xaqiijiyey inuu aad ufiican yahay. Khadkii wax soo saarka ee dhammeystiran ee xadhkaha PET ee ay maamusho macaamiisha Tajikistan bilowgii sannadkan ayaa la dhammeeyay oo waqtigeeda la geeyay.
Khadkan waxsoosaarka ayaa haysta 100% PET alaabada dib loo warshadeeyo. Laga soo bilaabo soo-saarista xargaha xargaha illaa soo-saarista alaabada xargaha ee mashiinka maroojinta xargaha, kulligood waa otomatik ah, iyada oo aan ku dhowaad lahayn wax shaqaale ah oo loo baahan yahay. Sababta oo ah sheyga ceyriinka ahi waa sheyga dib loo warshadeeyo, qiimaha waxsoosaarka ayaa hooseeya, faa iidada ayaa u tixgelinaysa macaamiisheena iyaga oo ku iibinaya wax soo saarka xargaha ee suuqa. Khadkan soosaarka xarigga ee 'PET xadhig' ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa soo saaridda shabaq badbaadada caagga ah, shabaqa cayayaanka lagu caddeeyo iwm.
Alaabooyinkeenna, wax dhib ah kama soo gaarin xiriirkii hore ee shaqaalaha iibka, xaqiijinta amarrada, soo-saarista dambe iyo keenista qalabka, macaamiisha ayaa aad ugu qanacsan. Waxaan rajeyneynaa in macaamiisha ay heli karaan qalabka sida ugu dhaqsaha badan, u galiya wax soo saar oo ay macaash wanaagsan helaan. Tani si fudud ugama fiirsaneynin saameynta cudurka coronavirus-ka adduunka ee hoos u dhaca suuqa.
Waxaan la socon doonnaa alaabo tayo sare leh, adeeg hufan, iskaashi guul leh, aan u heellan nahay inaan u adeegno macaamiil badan isla markaana aan macaamillo faa'iido leh u abuuro.
Waqtiga boostada: Aug-05-2020